saddex jiga, Grindelwald, Wengen, iyo Murren, waxa daboola Jungfrau baas wiish gobolka. Waxaa riyo jiilaalka rumowday!
by tareenka: Inta aad ku safri kartaa tareen ski ka London St. Pancras si Wengen waxaa jira tiro ka mid ah isbedel. Haddii aad Tegay qoyskaaga, waxaan ku talinaynaa in helitaanka diyaarad in Bern ama Zurich. From waxaa jira, qaadan xiriir tareen toos ah via Bern si Interlaken Øst iyo intii ka dambaysa in Lauterbrunnen. waxoogaa ugu danbeysay ee sodcaalku waa Ieexdo kaliya by rail ka Lauterbrunnen iyo qaadataa uun 15 daqiiqo.
Haddii aad la kulantay ee skiing, ka dibna Best jiga Ski in ay booqdaan tareen noqon doonaa Sauze d'Oulx degaanka. Marka baraf uu hoos u dhaco beeraha budada u dhexeeya dhirta oo runtii soo galay iyaga u gaar ah. Jawiga tuulada waa xiiso leh iyo soo dhoweyn iyo soo jiidashada oo ka mid ah waddooyinka cobbled jir ah run ahaantii ku darayaa a taabashada qurux badan si ay u quudhin ah.
taga London St Pancras on 9.24am Eurostar ilaa Paris Nord, beddesho saldhiga by taxi iyo qaadan 2.41pm ah TGV ka Paris-Lyon si Oulx, yimid 7.23pm. From waxaa waxaa 15 daqiiqo bas ama taxi.
mar hore aad leedahay buuxiyey oo boorsada? Good! maxaa yeelay, in qeybta ugu adag safarka xalliyo. Tayaasha aad tareenka qaadan doontaa daqiiqo Diintooda, aan ajuurada admin! Maxaa raaxo ah! Booqasho Save A tareenka hadda iyo ballan aad fasaxa ee Meyeydaan.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/ski-resorts-visit-train/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)